Ọkụ na TCDD ụlọ rụrụ na Derince | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliỌkụ Ọkụ na TCDD inlọ Ndị Epuputara na Derince
25 / 03 / 2020 41 Kocaeli, ụgbọ okporo ígwè, General, Mpaghara Marmara, Turkey
Ọkụ na ụlọ tcdd ehichapụrụ nke ukwuu
N'ime oke usoro nke ahụike aezuzuru na mba niile, ndị otu Derince Obodo rụrụ ka ha na-arụ ọrụ nchekwa.
Ọkụ na-enwu ọkụ na ụlọ TCDD
N'ịgbasa ọkwa banyere mpụta nke ụdị coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) na mba anyị, Obodo Derince emeela ka ọrụ ịdị ọcha ya kpuchido ndị bi na ọrịa ahụ. N'ime oke nke usoro ndị ahụ, ndị otu nje na-guzobere n'ime ime obodo na-arụ ọrụ ha kwa oge, ebe usoro mgbochi na-aga n'ihu na mpaghara ndị ọha na-eji, ọkachasị ụlọ ọrụ na ndị otu. N'uzo a, ìgwè ndị otu Derince rụrụ ọrụ nhicha zuru oke n'ụlọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka Fire Fire Brigade Group na TCDD na mpaghara ahụ.
Ozi si Onye isi ala Aygün Nọrọ n’ulo
N'ikwu na ọgụ megide coronavirus na-aga n'ihu, Derince Mayor Zeki Aygün kwuru na nkwupụta ya na mgbasa ozi mmekọrịta, ““lọ ọha na eze, ebe ofufe, ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ akụ, PTT alaka, muhtars agbata, bọs ọha, taxis, ụgbọ ala, Anyị na-ekpochapụ nkwụsị, ATMs akụ, ebe egwuregwu na ọtụtụ ebe ọha. Anyị na-aga n’ihu ọrụ anyị maka udo na ahụike nke ndị anyị n’echebaraghị oge ọrụ. Ekwenyere m na anyị ga-ahapụ usoro a n'ikike nke Allah. Anyị na-arụ ọrụ maka gị. Gị onwe gị kwa, nọnyeere anyị n'ụlọ a. ”
Ụlọ ọrụ Office nke Sivas na-eleta Tüdemsaş Firefighters Staff
Ogwe ihe mita 2.5 maka ụgbọala
Ndị na-ere ọkụ anaghị abanye n'okporo ámá n'ihi tramway na Izmir
Firefighting Junction na Elazığ
70 ugbo ala gafere otu ụbọchị na mgbanye ọkụ mezue
Nkwupụta Okike: TCDD 1 Mpaghara ọdụ, ọdụ ụgbọ mmiri na ingslọ maka ụgwọ eletriki ...